पर्दा भित्रको क्याम्पसको कथा - Khabar Break | Khabar Break
पर्दा भित्रको क्याम्पसको कथा
भोजराज ढकाल,देख्नेका आँखा फुटे, सुन्नेका सहि नहोस् । मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस हेटौंडा नगरीको मात्र होइन सिङ्गो मकवानपुर जिल्ला र ३ नम्बर प्रदेशको गरिमा बोकेको शैक्षिक संस्था हो ।
मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस अझ २ नम्बर प्रदेशमा समेत चर्चित नाम हो । हेर्दा मुख्यमन्त्रीज्युको छहारीमा समेत हुर्केको देखिन्छ । पर्दा भित्र कहालीलाग्दो परिस्थिति सृजना भएको प्राध्यापकहरुको बुझाइ छ । आफ्नो भविष्य समेतको चिन्ताले भयबित हुँदै गए । न्याय खोज्न जाने स्थान समेत पाइएन । यिनै पृष्ठभूमिमा संस्थाको कथा सबिस्तार बर्णन गर्ने यो आलेखको आशय हुनुपर्छ ।
चाकडी र लम्पसारले ग्रस्त हुनु :
न्यायको तराजु सिद्धान्त र धर्मशास्त्रमा मात्र भेटिन्छ । संस्था भित्र योग्यता र क्षमताले कहिल्यै प्रश्रय पाएन । चाकडी र लम्पसार जसले बढी गर्छ उ नै योग्य ठहरिने संस्कारको विकास गरियो । संस्थाका अभिभावक समेत त्यसैमा रमाए । उहाँहरुको शरणमा नजाने जो कोही अयोग्य ठहरिए । केहि व्यक्तिको रिपोर्टिङका आधारमा पर्दा भित्रबाट संस्था संचालन गरियो । भ्रममा नपरौ, यहाँ पार्टी छैन संगठन पनि छैन । नितान्त प्रतिशोध, चाकडी, लम्पसार र रिपोर्टिङले काम गरेको छ ।
आर्थिक दुरावस्था :
सत्य प्रकट नहु“दासम्म अभियान जारी छ । प्राध्यापकहरुले बिगत पा“च वर्षदेखि आजसम्म तलब, सेवा र अन्य शर्तहरु नियमित रूपमा प्राप्त गर्न सकेनन् । कुनै योजना छैन । भए दिने, नभए नपाउने अवस्था छ । संस्थामा कुन दिन तलब जान्छ सोध्न सक्नु हुन्छ । २०७५ साल पुसदेखि आजसम्मको कोष ( नागरिक लगानी, सञ्चय र कल्याण) समेत गएको छैन । संचालक समितिसँग कुनै नैतिक जिम्मेवारी छैन । २०७१ सालदेखि आजसम्मको उपदान बापतको रकम कागजमा देखियो तर प्राध्यापक, कर्मचारीको खातामा जान सकेन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी) बाट पटक–पटक गरी अठार करोड रुपैयाँ प्राप्त भयो । तथ्य किटानी नहुँदासम्म अठार करोड सहायता प्राप्त हुँदा पनि संस्था आर्थिक रूपमा सकटमा जानू प्राध्यापक र कर्मचारी पक्कै दोषी होईनन् । संस्थाको आजको दायित्व ४ करोड भन्दा माथि छ ।
प्राध्यापकहरुको मनोबल खस्किँदै जानु :
संस्थाको इतिहासमा आजसम्म कुनै विद्यार्थी संगठनहरुले प्राध्यापकहरुको सेवा र सर्तमा आँखा लगाएका थिएनन् । शूल्क बढाउन नदिनु, गुणस्तरीय शिक्षणको अपेक्षा गर्नु, विद्यार्थीको दुखःसुख बुझ्नु बिद्यार्थी संगठनको धर्म भित्र पर्छ । घाटा पूर्ति गर्न प्राध्यापकहरुले खाईपाई आएको तलब कटौती गर्नुपर्छ भन्ने तर्कले प्राध्यापकहरुको मन भाँचिएको छ । घाटा किन भयो ? कसले ग¥यो ? खोजीको विषय कहिल्यै भएन । शुन्य नाफामा चल्ने संस्थाहरु अर्को बर्ष तलब वृद्धि हु“दा पुनः घाटामा जान्छ । यो वर्ष त ६० प्रतिशतमा आँखा लगाइयो । अर्को वर्ष तलबमा आ“खा लगाउने ? अझ घाटामा जाँदा के होला ? कसरी पुर्ति गर्ने ? यो समस्याको समाधान थिएन । शूल्क वृद्धि गर्न विद्यार्थीको चित्त बुझाउने, गुणस्तरको प्रतिबद्धता गर्ने, सकेसम्म अनियमित खर्च कटौती गर्ने दायित्व कसको हो ? प्राध्यापक जिम्मेवार हुन ? नैतिक दायित्व लिने क्याम्पस प्रशासन र संचालक समितिको लाचारीले प्राध्यापकहरु बिचलित हुन पुगे । हामीले आठ बर्षदेखि संस्था ध्वस्त भएको जानकारी गरायौं । आज पनि अभियान जारी छ । अदालतमात्र गएका छैनौं । हामी प्राध्यापकहरु सास रहेसम्म बिकृती र बिसंगतिको बारेमा लडिरहन्छौ । संस्थालाई यो अवस्थामा ल्याउनेलाई छाड्दैनौं । अनशन र लामो अस्थिरतापछि आठ वर्षदेखि लागू भैरहएको ६० प्रतिशतको सबै सकारात्मक पक्ष छन् । प्राध्यापकहरुले सतप्रतिशत योगदान गरी ४० प्रतिशत (छुट) योगदान समेतलाई अबमुल्यन गर्न खोजियो । भोलि प्राध्यापकहरुले नपढाउँदा संस्थालाई पर्न जाने अतिरिक्त १२५ प्रतिशत (१०० तलब र उपदान र सञ्चय कोष) थप भार पर्न जाँदा विद्यार्थीहरुको कति ढाड सेकिएला लेखा–जोखा छैन । ६० प्रतिशतको फण्डा ल्याएर संस्थामा अस्थिरता सृजना गरी कारक तत्वलाई पुनरावृत्ति गर्न मुख मिठ्याउनेहरु नै संस्था छाडेर भाग्ने दिन नआओस् । यि पृष्ठभूमिले संस्थाको उन्नयन हुन सक्तैन । प्राध्यापकहरुलाई टर्चर दिएर गुणस्तरीय शिक्षण खोज्नेको मनोकामना पुरा होस् ।
प्राध्यापक संघको भूमिका :
संस्थाको सबै ब्यथितिको बारेमा व्यक्त गर्न समेत लाज हुन्छ । सबै स्थानमा यत्रतत्र छन् । प्राध्यापक संघले रोक्न सक्छ । तर, संचालक समितिको ठाडो आदेश र तोकमा त्यो काम भएरै छोड्छ । प्राध्यापक संघले आर्थिक अनियमितता रोक्छ । माथिको आदेश हो भन्दै तोक लगाएर फत्ते गरिन्छ । संस्थामा प्राध्यापक, कर्मचारी चाहिएको होस् नहोस अन्तै डिलिङ्ग हुन्छ । प्राध्यापक संघले बिरोध गर्छ । माथिको आदेश हो गर्नै पर्छ तर्क प्रस्तुत गरिन्छ । माथिको आदेश दैब जानुन् । केही मात्रामा प्राध्यापकहरु दोषी होलान् । क्याम्पस प्रशासन र संचालक समितिको आश्रयमा भएका छन् । मेरै कारण संस्था चलेको हो, मैलेमात्र काम गरेको छु, भन्दै रिपोर्टिङ गर्नेहरु पनि प्रशस्त छन् । प्राध्यापक संघले गम्भीर रूपमा हेरेको छ । प्राज्ञिक संस्था हो भनेर कसैले भन्दैन ।
यी यस्तै आरोह अबरोहको दुश्चक्रमा यात्रा गर्दैछ संस्था । संस्थामा कुनै नैतिक जिम्मेवारी नलिने, संस्था ध्वस्त भए प्राध्यापकलाई दोष दिने प्रति कहिल्यै सम्मान हुनेछैन । धेरै बिकृति र बिसंगतिको कथा साभार गरिएपनि संस्थाको समृद्धि कसरी होला भन्ने उपायमा कलम चलाउन समय अप्रयाप्त भयो ।
(लेखक पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक संघ, मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस इकाई समितिका सभापति हुनुहुन्छ ।)